Jaamacada Caalamiga ee Daaha oo Maanta Xarun Weyn ka furatay Degmada Hodan “SAWIRO” | Radio Iftin
Jaamacada Caalamiga ee Daaha oo Maanta Xarun Weyn ka furatay Degmada Hodan “SAWIRO”
(Friday, March 27, 2015)- Munaasabad si heeri sare ah loo soo agaasimiyay laguna furayay Xarun ay Jaamacadaha Daaha ka sameesatay Degmada Hodan ayaa maanta waxa ay ka dhacday hoolka weyn ee Xarunta Jamacada caalamiga ee Daha ee Magaalada Muqdisho .
Munaasabadaan ayaa waxaa ka soo qeyb galay Masuuliyiin katirsan Dowlada Soomaaliya, Masuuliyiin katirsan Safaarada Sudan ee Dalka Soomaaliya, Madaxda Jaamacada Daha iyo Waalidiin iyo ardayda waxkabarata Jaamacdaasi.
Intii ay socotay Munaasabada Waxaa khudbad xiiso badan u jeediyay Masuuliyiintii iyo dadkii kale ee kasoo qeyb galay Gudoomiyaha Jaamacada Caalamiga Daha Sheekh Abuukar Xasan Maalin , waxa uuna Gudoomiyaha ka hadlay marxaladahii kala duwan ee Jaamacadu soo martay iyo heerka ay xiligan taagan tahay.
“Jamacada caalamiga ah ee Daaha aad iyo aad ayey u hormartay, waxayna gaartay hormar muuqda oo aad ujedaan halka ay maanta mareyso, jacamada markii aan fureynay ilaa iyo hada waxaa u dhaxeya farqi aad u weyn jaamacada Dahaha waxay gartay caalamka oo dhan, waxaan jecelnahay in ay anaga lala soo sameyaan xirir jamacadaha kale ee dunida kuyaala waxaa naga go’ in aaan hormarka jamcada caalamiga ah ee Daaha in aan ka shaqeyno dhamaan teena,”Ayuu yiri Sheekh Abuukar Xasan Maalin.
Daahir Axmed Salaad oo isna ka hadlay Munaasabada ayaa ku dheeraaday hormarka ay gaartay Jaamacada Daaha, waxa uuna sheegay in ardayda ka qalin jabisa Jaamacadooda ay heli doonaan farsado kale oo waxbarasho iyo shaqo intaba, isagoona ardayda dhigata Jaamacada Daaha ku booriyay in waxbarashada ku dadaalaam.
Waxaa sidoo kale Munaasabada ka dhacday Xarunta Jaamacada Daaha ka haday Masuuliyiin iyo dadyow kale kuwaa oo dhamaantood ka marqaati kacay hormarka ay gaartay Jaamacada Daaha oo kamid a Jaamacadaha kajira Muqdisho.